कागवा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
नाओशिमा, कागवा प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा यलो पम्पकिनको कला
Shikoku क्षेत्र!4प्रान्तहरूमा गर्नलाई उत्तम चीजहरू >
कागवा प्रान्त सिकिको टापुको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो प्रिफेक्चर ओकायामा प्रान्तको विपरीत किनारमा सेतो इनल्यान्ड सागरमा सेतो ओहाशी पुल द्वारा बाध्य गरिएको छ, १२,12,300०० मिटर लम्बाई छ। त्यसोभए, तपाईं यस क्षेत्रमा जान स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। कागवा प्रान्तको अपतटीय टापुहरूमा एउटा अद्भुत संग्रहालय छ। र कागवा प्रान्तमा त्यहाँ स्वादिष्ट उडोन (बाक्लो जापानी नूडल्स) का रेस्टुरेन्टहरू छन्। तपाईं यहाँ किन झार्नुहुन्न?
बेनेसे आर्ट साइट नौसिमा
Takamatsu शहर मा Ritsurin गार्डन
कागवा प्रान्त सिकिकोको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो प्रान्त, ओटोयामा प्रान्त संग सेतो इनल्याण्ड सागरको अर्को पट्टि, एक शीतोष्ण जलवायु संग खर्च गर्न सजिलो छ।
सनुकी मैदान समतल उत्तरमा फैलिएको छ र सबै सेतो इनल्यान्ड सागर कुनै पनि आकारको ११ any टापुहरूको साथ डटिएको छ, शोडो शिमा टापु सहित।
मुख्य शहरहरू जस्तै ताकामात्सु शहर सनुकी मैदानमा छन्। प्रान्तको दक्षिणी भागमा, १००० मिटर उचाईमा पर्वतहरू जडिएका छन्।
कागावा प्रान्तको केन्द्र टकमात्सु शहर हो। यो शहर स्थापना भएको थियो र महल शहरको रूपमा फस्टाएको छ जब तककामातु महल यहाँ सन् १ 1588 मा निर्माण भएको थियो।
आज, Takamatsu Shikoku मा एक महत्वपूर्ण आगमन बिन्दु र १ 1988 inXNUMX मा सेतो ओहाशी पुलको समापनको कारणले सबै टापुमा अन्वेषणको लागि एक सुविधाजनक शुरुवात बिन्दुको रूपमा सेवा गर्दछ।
कागावा प्रान्तमा टाकमात्सु एयरपोर्ट छ। यस एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन गरिन्छ।
ताकामात्सु एयरपोर्टबाट, यो सीधी बस बाट takes० मिनेट लिन्छ JR तकमात्सु स्टेशनमा।
Shinkansen कागवा प्रान्तमा संचालित छैन। जे होस्, कागवा प्रान्त सिकिको टापुको प्रवेशद्वार हो। Takamatsu स्टेशन बाट, योसन लाइन र कोटोकु लाइन संचालित छन्। र ताडोत्सु स्टेशनबाट, डोसान लाइन सञ्चालन हुन्छ।
Takamatsu शहर, कागवा, जापान मा प्रामाणिक Sanuki उदन = शटरस्टक
यो थोरै अनौंठो हुन सक्छ, तर यदि तपाईं कागावा प्रान्तमा जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईंले पहिला कुनै दर्शनीय स्थलमा जानु अघि उडोन खानुहोस्। उदोन एक सस्तो, स्वादिष्ट र स्वस्थ डिश हो।
कागवा प्रान्तका व्यक्तिहरू udon मन पराउँछन्। यस क्षेत्रमा धेरै धेरै udon रेस्टुरेन्टहरू छन्। अवश्य पनि, तिनीहरू घरमा उदोन खाउँदछन्। धेरै थोक सुपरमार्केटमा बेचिन्छ।
म धेरै चोटि तकामात्सु शहर र मारुगामे शहरमा आएको छु। जब म यस क्षेत्रको एक उदोन रेस्टुरेन्टमा जान्छु, मान्छेहरूले वास्तवमै स्वादिलोपनाबाट खाउँदछन्। यो धेरै रमाइलो दृश्य हो। जब म यो दृश्य देख्छु, म महसुस गर्छु कि म कागवा प्रान्तमा आएको हुँ।
नाओशिमा टापु महासागर तर्फ क्लाउड्स र स्काई एण्ड फोरस् = शटरस्टकको साथ
कागवा प्रान्तले शान्त सेतो इनल्यान्ड सागरको सामना गर्यो। अफशोर टापुहरूमा त्यहाँ "बेनेसी आर्ट साइट नौसिमा" सम्बन्धित कला संग्रहालयहरू छन्। हालसालै यी टापुहरू पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छन्।
"बेनेसी आर्ट साइट नओशिमा" कागावा प्रान्तको नौसिमा र टेशिमा टापुहरूमा र ओकायामा प्रान्तको इनुजीमा टापुमा सबै कला सम्बन्धित गतिविधिहरूको लागि सामूहिक नाम हो।
म जापानी संग्रहालय को बारे मा एक लेख मा बेनेस आर्ट साइट Naoshima परिचय।
>> कृपया "Benesse Art Site Naoshima" मा लेख लेख्नुहोस्।
कागावा प्रान्तमा चीचिबुगाहामा, शिकोकू = शटरस्टक
शिकोकाको कागावा प्रान्तको चिचिबुगाहामा लामो समुद्र तट हो जसको कुल लम्बाई १ किमी छ। यहाँ, कम ज्वारभाईमा, समुद्री किनार ऐनामा जस्तै देखिन्छ। विशेष गरी साँझमा, तपाईं अचम्मका फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ। किन यहाँ तस्विर लिने र इन्स्टाग्राममा पोष्ट नगर्ने? सामग्रीको तालिका फोटोहरू ...
शिकोकाको कागावा प्रान्तको चिचिबुगाहामा लामो समुद्र तट हो जसको कुल लम्बाई १ किमी छ। यहाँ, कम ज्वारभाईमा, समुद्री किनार ऐनामा जस्तै देखिन्छ। विशेष गरी साँझमा, तपाईं अचम्मका फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ।
Takamatsu शहर मा Ritsurin गार्डन, Kagawa प्रान्त = शटरस्टक
टागामाट्सु शहर, कागवा प्रान्तमा अवस्थित रिटसुरिन गार्डन, शिकोकोमा सर्वश्रेष्ठ जापानी बगैंचा हो। यो १ the औं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण गरिएको हुनाले यसलाई क्रमिक रूपमा डेम्योले राम्ररी हेरचाह गरेको छ। क्षेत्रफल 16०,००० वर्ग मिटर छ। शिल्पकर्मीहरू द्वारा सुरक्षित पुरानो रूखहरू अद्भुत छन्। यसमा ...
कागावा प्रान्तको ताकामात्सु शहरमा रहेको रितसुरिन बगैचा जापानी बगैंचा हो जुन विदेशी पर्यटकहरूले धेरै प्रशंसा गर्दछन्। यो १ 16 औं शताब्दीको अन्तमा निर्माण गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि यस भूमिमा शासन गर्ने क्रमिक डेइमिओस विकास भइरहेको छ। यसको पछाडि पहाडहरू सहित 750,000०,००० वर्ग मिटरको भूमि क्षेत्रसहित, यस बगैंचामा त्यसबेलादेखि धेरै पुराना रूखहरू छन्। नोभेम्बरको उत्तरार्धमा, शरद colorsतु र colors्ग दर्शनीय हुन्छन्।
"Shikoku क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता